Madaxweyne Farmaajo ma iska Hubiyey howsha ka socota Guriga Maama Khadiija oo ah Xarunta Nabad Sugida | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Farmaajo ma iska Hubiyey howsha ka socota Guriga Maama Khadiija ...
Madaxweyne Farmaajo ma iska Hubiyey howsha ka socota Guriga Maama Khadiija oo ah Xarunta Nabad Sugida
Sidii ay u bilaabatay arimaha doorashooyinka dalku aadayo. Waxaa soo baxayey howl baaxad leh oo lagu diyaarinayo xildhibaanada soo socda, taas oo sida in badani og tahayba ka socota Xarunta Nabadsugida Qaranka ee Loo yaqaan Habar khadiijo. Sida muuqata waa howl si siloon u socota.
Sida caadada aheydba soo jireenkii doorashooyinka Dalka ka soo dhacay waxaa bilowda kala cara gedisasho siyaasadeed. Taas oo keenta isu guur qarsoon oo soo shaac baxa saacadaha ugu dambeeya doorashada ka hor. Ma aha wax inagu Cusub. Tusaale: Reysulwasaarahii Hore Xasan Cali Kheyre oo ka mid ahaa gudigii doorashada ee Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa u wareegay Madaxweyne Farmaajo oo u tartamayey Madaxeynenimo. Waxaa jiray rag kale oo musharaxiinta u kala guuray.
Haatan FAHAD Yaasiin iyo Abdishakuur Ali Mire ayaa ah kuwo si weyn ugu jira olole qarsoon oo lid ku ah Madaxweyne Farmaajo. Waxaa jira kulamo qarsoodi ah oo uu Abdishakuur kula yeeshay Istanbul Ex Rw Kheyre. Xiligaa Abdishakuur waxuu iska dhigayey oo uu isku qariyey inuu Turkiga Caafimaad ugu kaxeeyay Maareeyaha Somali Airlines oo xanuunsanayey. Balse arintu intaa wey ka balaaran tahay. Abdishakuur waxuu kulamadaa Kheyre kula heshiiyey inuu kala shaqeynayo sidii uu doorashada ugu guuleysan lahaa. Dhinaca kale waxuu Madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuusan aheyn nin balan leh.
Intaa kadib maxaa dhacay. Xildhiban Abdishakuur waxuu ka shaqeeyay xiriir dhex mara Kheyre iyo Fahad Yaasiin oo markii horeba qorshaha Safarka Abdishakuur wax ka weday. Abdishakuur waxuu qadka telefoonka ku wada hadashiiyey Kheyre iyo Fahad. Taas oo keentay in Wasiirka Arrimaha dibada ee QATAR uu xiriir wada shaqeyn ah iyo dhaqaale uu doorashada ku galo u sameeyay Kheyre. Taas oo Fahad uu kaalin muuqata ka qaatay.
Wasiiru dowlaha arrimaha Dibada ee Turkiga iyo wakiil ka Socday Reysulwasaare kuxigeenka QATAR ay si wadajir ah RW hore Kheyre kulan kula yeesheen Istanbul.
QATAR oo waayahan dambe naawileysay inay hesho musharax kale si ay ugu baxsato hadii Madaxweyne Farmaajo xilka ku soo noqon waayo. Ayaa haatan gacan labaad ku wada Kheyre. Mana cada dadaalka iyo juhdiga ka socda Taliska NISA inuu yahay mid lagu taageerayo in mar kale Madaxweyne Farmaajo xilka ku soo noqdo 4 sano kale.
Waxaa jira Siyaasad dhaqan ahaan ay Madaxda Soomaalidu leeyihiin. Taas oo ah qofka miisaanka culus leh in la siibo waqti kadib. Dib u eeg Madaxweyne Sheekh Shariif . Sidoo kale Madaxweyne Xasan Sheekh. Sidaa darteed FAHAD waxuu aaminsan yahay in Madaxweyne Farmaajo uu xariga u siibi doono haduu soo noqdo. Ayna muhiim u tahay si uu saaxada siyaasada ugu sii dhex jiro in uu xooga saaro in uu la soo noqdo Madaxweyne Cusub oo uu 4ta sano ee mudo xileedkisa la qeybsado howsha.
Hadaba Maxaa la gudboon Madaxweyne Farmaajo
Waa in uu dib uga fekeraa baaritaan xoogana ku sameeyaa waxa jira. Sxbtinimadu macno u sameyn meyso. Balse waa in uu hoostiisa iska eegaa. Wax walbana uu u qaataa xaalad xasaasi ah. Waa waqtiga keli ah ee leysku daba gediyo.
Allow ma la taliyey
Previous articleGaari uu lee yahay Ra iisal wasare Ku xigeenka Mahadi Guuleyd oo Khaad koontara baan ah lagu qabtay
Next articlePrice of guns rises in Mogadishu amid fears of election violence in Somalia
Magaalada Muqdisho oo ay ku nooshahay bulsho badan ayaa waxaa hoos usii dhacaya dadka raaca gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya caasimadda. Sababta ugu weyn...
Soomaaliya iyo midowga Yurub oo Heshiis kala saxiizday